War Naxdin Leh : 30 Qof Oo Ku Dhintay Dooni Kula Degtay Ciyaaryahano – Wadanka Uganda
HomeAfricaWar Naxdin Leh : 30 Qof Oo Ku Dhintay Dooni Kula Degtay Ciyaaryahano – Wadanka Uganda
Ciidamada Booliiska wadanka Uganda ayaa xaqiijiyey in 30 qof ay dhinteen kadib markii dooni siday koox ciyaaryahano kubadda cagta ah iyo taageerayaashoodii ay ku qaraqantay dooxada Lake Albert ee galbeedka wadanka Uganda Axadii.
Doonidan oo ay saarnaayeen 45 ruux, ayaa 15 kamid ah la xaqiijiyey in la bad-baadiyey, isla markiiba, halka dadkii kale maydkooda ay soo daad gureeyeen ciidanka booliiska iyo koox kaluunka ka dabata harada oo ku dhawaa meesha shilku ka dhacay.
Kooxdan doonidu la degtay oo ka soo safartay tuulada Kaweibanda oo ka tirsan degmadda Buliisa, ayaa doonayay inay ciyaar saaxiibtinimo ah la soo ciyaaraan koox ka dhisan tuulada Runga ee degmada Hoima.
John Rutagira, oo ah taliyaha ciidanka Booliiska, ayaa u sheegay warbaahinta, in culays xad dhaaf ah oo la saaray uu sababbay in doonidu gadoonto.
Dad goob joog ah ayaa iyaguna xaqiijiyey in xilliga ay doonidu gadoontay ee biyuhu liqeen ay ahayd, wakhti biyuhu deggan yihiin oo aanay kacsanayn haradu,
“Doonida rarka ayay ka badiyeen. Goob-jooge yaal ayaa booliiska u xaqiijiyey in baddi rakaabka doonidu ay dhinac (janbi ) ka wada fuuleen, taas oo keentay natiijada ah inay dheelido doontu,” ayuu Taliye Rutagira yidhi.
Ciidanka Booliiska iyo rag harada ka kaluumaysta ayaa ka qayb qaatay bed-baadinta rakaabka.